Ihe Njirimara Ngwá Ọrụ Nkịtị Iji Meziwanye Mmanya Ndị Ọrụ
Ihe Njirimara Na-ahụ Maka Njirimara Na-ahụ Maka Ngwá Agha Iji Nwee VMs
Mgbe ọ na-abịa n'ịgbanwe ihe nkesa anụ ahụ n'ime ihe nkesa na-emepụta, ịchọta na ịghazi ihe nnweta ihe nkesa ziri ezi maka igwekorita igwefoto nwere ike ịghọ ihe dị njọ. Nke a bụ ihe doro anya na ndị ọkachamara IT na-eche ihu, mgbe ha na-atụle nhọrọ ngwaike maka ndị ọrụ ha kwadoro.
Inwe Akwukwo Nso
Mgbe ị na-ahụkarị ikpo okwu, mkpa dị mkpa maka sava nkesa ịchọrọ bụ inwe ezigbo ego iji gboo mkpa nke igwe arụmọrụ. Nke a bụ ihe na-agbanweghị agbanwe maka ụlọ ọrụ niile: onye na-ahụ maka ndị ọrụ na-enye ihe ọ bụla maka igwe ọ bụla. Ngwaọrụ ndị mebere emepe nwere ihe oriri anọ: nchekwa, CPU, netwọk na akụ disk. Ọtụtụ mgbe, ihe mgbu abụọ ahụ bụ disk na RAM.
E nwere akụkụ abụọ maka disk: arụmọrụ na ikike. Ị ga-achọ ihe karịrị nke abụọ ndị a karịa ka ịchọrọ na ọ dị mkpa maka ịmepụta igwefoto mebere. Chọpụta ma kwuo ọnọdụ azụmahịa (IOPS) mkpa nchekwa nke mgbakwunye na ntinye. Ị ga-etinyekwa ikikere ike disk maka ihe ndị dị mkpa maka ịkwado igwe arụmọrụ.
Kpachara anya maka Cache Diski
A na-eji RAM ma ọ bụ ebe nchekwa dị ka oghere diski site na ọtụtụ usoro sistemụ, mana ekwughị na eji ya. Ọ bụrụ na ị daa ịbawanye ebe ị na-arụ ọrụ igwefoto iji mepụta cache a, ọ nwere ike ịkpata arụmọrụ ngwa ngwa. N'ihi mmejọ a, ebe data nke na-agbanwe sava ndị dị n'ime mebere ga-alaghachi na ihe owuwu anụ ahụ.
Ụzọ kachasị mfe ịhọrọ akụrụngwa zuru okè bụ ịgbakwunye ngwaike n'ime ihe nkesa ahụ ọ bụla ị na-anọchi na igwe arụmọrụ. Ị nwere ike ịzụta ihe onwunwe zuru oke, iji nweta ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị a wụnye, ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ ihe dị oké ọnụ ahịa.
Nyochaa ikikere Akaụntụ
Ụzọ ọzọ bụ iji anya gị hụ ihe oriri. Ọ bụrụ na ị maara na ịrụ ọrụ gị ka mma, ọ ga-ekwe omume ịbaa usoro ikpo ọkụ na ụzọ dị mma karị. Chọpụta ọnụ ọgụgụ nke akụ ọ bụla nke igwe na-ere ma gbakwunye ọnụ ọgụgụ ndị a. Ị ga-azụta ngwaike zuru oke maka ọnụ ọgụgụ nke ojiji. Gbaa mbọ hụ na ị ga-ahapụ obere ihe dịka ịchọrọ ịchọrọ hypervisor chọrọ ihe onwunwe iji jikwaa igwe arụmọrụ ọ na-aga n'ihu.
Na nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị ahụ, enwere ike ịnweta ezigbo ego maka igwe ọ bụla. Naanị lezienụ anya na ígwè ọrụ ahụ adịghị arụ ọrụ nke ọma ma tụlee ígwè ọrụ ndị chọrọ ihe ndị ọzọ mgbe ha na-eme ka ha dị ọcha. Ọzọkwa, na-etinye ego ọzọ maka ego ndị ọzọ a, n'ihi na ihe nwere ike ịga na-ezighi ezi ma ọ bụrụ na i gughị ọnụ ọgụgụ isi.
Ọ ka mma ka ịchọta ọkwa dị elu na akaụntụ ka ị ghara ịhapụ ihe onwunwe gị, ma dozie mkpa ọ dị ịzụta ihe nbudata ọzọ na oge ikpeazụ, nke nwere ike ọzọ ịkwanye akpa gị.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-echebara ihe ndị ahụ e kwuru n'elu, ọ nwere ike ọ gaghị esiri ike ịhọrọ akụrụngwa ahụ chọrọ maka VM Bochum.
Atụmatụ ụtụ isi maka ndị na-ede blọgụ
Ịmalite na Google Blogger
Webmaster Technologies kachasị ọhụrụ na onye ọbịa ga-akwado
Apple's Cloud - Ọchịchị kachasị ọhụrụ na ojii Arena
10 Nzọụkwụ iji Malite Blog na WordPress.org
Olee otú bulite a Blogger Template
Iji ZURB Foundation Theme maka Drupal
Nchọnchọ Job Ịga nke Ọma maka ndị na-ede blọgụ
12 nke Obodo kachasị mma ịrụ Ọrụ Site na Home
Kedu ihe bụ Samsung Etubere Egwuregwu Egwuregwu?
Otu esi egbusi Windows 8
Mmekọrịta VPN na Satellite Internet Service Compatibility
Ngalaba Na-arụ Ọrụ Na-enweghị Nzube Multi-Purpose Network
Esi gbanwee ederede Email na HTML ma ọ bụ Plain Text na Outlook
Gụọ akụkọ na gị iPad na Style
Otu esi edezi Outlook Mail gị na Mpaghara Oge Weebụ
Otu esi eziga eValentines na Web
Nintendo Nyocha 2DS: Ị Kwesịrị Ịzụta Ya?
5 Ụzọ ndị mmadụ na-eji Instagram
Jiri ụzọ mkpirisi ka ịgbakwunye ụbọchị nke oge a / Oge Excel
Otu esi echekwa onye Server si Malware na Boletproof Hosting
Otu esi ewepu ihe eji egwu Music Apple
Unarchiver: Tom Mac Mac
Esi edozi Mmasị Nhọrọ na Okwu 2016 maka PC
7 Usoro Ntuzi Ugboro Ochie maka Nkiri na Egwuregwu
Ịghọta Nchekwa mpịakọta na OS X
Kedu ihe bụ XLM File?
Esi tinye ya na Ndepụta Njem Safari gị site n'aka os X Mail